Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Harry Kane Oo Heshiis Cusub Saxiixaya, Chelsea Oo Heshay Fursad Ay Kula Soo Wareegeyso Jules Kounde, Xaalka Saka Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Harry Kane oo Heshiis Cusub Saxiixaya, Chelsea oo heshay Fursad ay kula soo wareegeyso Jules Kounde, Xaalka Saka iyo Qodobo kale
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka reer England Harry Kane ayaa laga yaabaa inuu heshiis cusub u saxiixo Tottenham haddii qandaraaskiisa lagu burburin karo qandaraaskiisa. 28 jirkaan ayaa hore u aaminsanaa inuu heshiis hore uu uga tagi karay Spurs xagaagan markii Manchester City ay isku dayday saxiixiisa. (Eurosport)
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans ayaa sheegay inuu “dookhyadiisa furanyuhiin” madaama uu weli wadahadalo heshiis cusub ah kula jiro Leicester City. 24 jirkaan ayaa lala xiriirinayay kooxaha Liverpool, Manchester United , Barcelona iyo Real Madrid. (Sky Sports)
Tottenham iyo Atletico Madrid ayaa labaduba dalab ugu yaraan 90m euros ah ka gudbiyay weeraryahanka reer Argentina ee Lautaro Martinez oo 24 jir ah oo ay Inter Milan diiday xagaagii, iyadoo Arsenal ay sidoo kale dib u dhacday ka dib markii ay soo bandhigtay dalab hoose. (Gazzetta dello Sport)
Weeraryahanka Arsenal Bukayo Saka ee Arsenal ayaa kooxo badan la soo xiriireen, laakiin Gunners ayaa u aragta 20 jirkaan “lama taabtaan”. (Thesun)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Bayer Leverkusen ee 18 jirka ah Florian Wirtz ayaa soo jiitay kooxo badan oo aan la magacaabin Premier League iyo sidoo kale Bayern Munich. (Express)
Fursadaha Chelsea ee saxiixa 22 jirka Sevilla ee daafaca dhexe ee France Jules Kounde waxay ku xirnaan doontaa haddii la xaliyo xaaladda qandaraas ee daafaca Jarmalka Antonio Rudiger iyo in kale. (DailyStar)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, ayaa sheegay inuu “muujiyay rabitaankiisa ah inuu sii joogo” Liverpool, laakiin ugu dambeyn wuxuu si xor ah uga tagay Paris St-Germain ka dib markii ay dareensiisay Reds. (L’Equipe)
Arsenal ayaan ka tagin rajadii ay ka qabtay saxiixa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Lyon Houssem Aouar waxayna bartilmaameedsan doontaa 23 jirkaan xagaaga dambe, laakiin Gunners ayaa ku adkaan doonta inay keenaan London haddii aysan u soo bixin Champions League. (Todofichajes)
Tottenham mar kale la filayaa inay ka mid tahay kooxaha koonaya inay la soo wareegto xidiga Cagliari ee 25-sano jirka qadka dhexe Nahitan Nandez, oo sidoo kale doonayaan kooxaha Inter Milan, Napoli, Roma iyo Fiorentina, marka uu furmo suuqa kala iibsiga dib u furmo bisha Janaayo. Kooxda ka ciyaarta Serie A ayaa la sheegay inay u furan tahay inay iibiso xiddiga reer Uruguay sannadka cusub. (Tuttomercatoweb)
Barcelona ayaa weli xiiso u qabta daafaca reer Argentina ee Cristian Romero oo 23-jir ah, kaasoo Tottenham kaga soo biiray Atalanta xagaagii. (Fichajes)
Juventus iyo AC Milan ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo Real Madrid xidigeeda 29-sano jir ah ciyaaryahanka qadka dhexe ee Spain Isco January. (Calciomercato)
Everton ayaa ceyrsaneysa bisha Janaayo inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Aberdeen Calvin Ramsay. Toffees-ka ayaa la sheegay inay u direen indha-indheeye si uu u daawado 18 jirka reer Scotland oo ciyaaraya kulanka Motherwell dhammaadka wiigga. (Scottishsun)
Watford ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixato 18 jirka weerarka ka ciyaara ee xorta ah Jimiel Chikukwa, kaasoo ka tagay Leeds United xagaagii. (FInsider)